အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီတီ့ စာအုပ်စင်
phyu July 24, 2011 at 9:05 AM
hi Good Day, I envy you, all the book are nice.
Hey TT Chan,
What will you do with Primary Books( Conquer - Editing and Punctuation, Composition,...?
jr July 24, 2011 at 1:13 PM
တို့က အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ တရုတ်စာ မတတ်လို့။
kwi kwi. J/K
ခရစ္စတလ် July 24, 2011 at 4:30 PM
တို့လည်း အားမကျပါဘူးအေ၊ လာငေးကြည့်ရုံသက်သက်ပဲ၊ မျက်စိအားနည်းတော့ အွန်လိုင်းတောင် အနိုင်နိုင်ပါကွယ်။
ဝယ်နိုင်အားနဲ့ စာပေကို မြတ်နိုးတဲ့စိတ်လေးကိုတော့
တီချမ်း July 24, 2011 at 5:06 PM
အနောနိ အဲ့စာအုပ်တွေ က တီလဲ လေ့လာတယ် နောင်ကလေးတွေအတွက်ကျောင်းဖွင့်ရင် စာသင်နည်းတွေပေါ့ ခုတော့ မောင်လဲ လေ့လာနေတယ်
ဂျူ စပျစ်သီးက ချဉ်တာလား ဟိ
ဒေါ်သလင်း အဲ့တာတွေက တီနောင်အချိန်ကျရင် စာကြည့်တိုက် အတွက် စုနေတာလဲ ပါတယ်လေ အဲ့တာကြောင့်ပါ နောက် စာအုပ်တွေကို ချစ်ကိုချစ်တာ စာအုပ်ပုံထဲ ထိုင်နေရရင် ပျော်တယ် စာအုပ်တွေရှင်းလိုက်ထပ်လိုက် လုပ်နေရရင်လဲ ပျော်တယ်
Robin Cook တော့ကြိုက်တယ် ထွက်သမျှအကုန်ဖတ်တယ်. fatal cure ဖတ်ပြီးသွားပြီ
စာအုပ်ဓါတ်ပုံတွေ မကြည့်ခင် ပို့စ်ကိုဖတ်နေရင်းနဲ့ တွေးမိတာ Public Speaking နဲ့ The Big Talk များပါနေမလားလို့...:)
လေးစားပါတယ်။ စာဖတ်နိုင်တာ။ အိမ်ပြောင်းရလွန်းလို့ စာအုပ်တွေကို မ၀ယ်တာကြာဘီ
Snow July 25, 2011 at 1:25 PM
စာအုပ်တွေကို ငှားစရာ မလိုပါဘူး။
စကင်န်ဖတ်ပြီး တင်ပေးရင် ရပါပြီ။ :D
David Aye Myat August 1, 2011 at 8:19 PM
အောက်တိုဘာလ ကျမှ ဒီစာအုပ်တွေအကုန် amazon က၀ယ်ပြီး iPad3ထဲထည့်လိုက်မယ်။